သနားစရာ ခွေးကလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သနားစရာ ခွေးကလေး
Posted by bigbird on Jan 20, 2011 in News | 11 comments
ဘရာဇီးနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၆၆၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ ပြီးဖြစ်သော မြေပြိုကျမှုသဘာဝဘေးအန္တရယ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ 
သူ ခရစ်စတီးယား မာလီယား၏ အလောင်းအားမြှုပ်နှံထားစဉ် မိမိသခင်၏မြေပုံအနီး ဘယ်မှမသွားပဲ
ထိုင်စောင့်လျှက်ရှိသော ( လေးယိုး) အမည်ရှိ ခွေးကလေးတစ်ကောင်အား သနားစဖွယ် တွေ့ ရှိရ
ကြောင်း။ တွေ့ ရမြင်ရသူအပေါင်း ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရကြောင်း AFP သတင်းဌာနက January 19 ရက်နေ့ တွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
has written 137 post in this Website..
bigbirdMG@gmail.com (မမေ့မလျှော့ မပေါ့မဆ ပဲ သတိအမြဲထားဖို့ မေ့နေသူပါ)
View all posts by bigbird →
ဒီခွေးကလည်း အစွဲ အလန်းကြီးလိုက်တာ..
အော်….ကျေးဇူးသိတတ်လိုက်တဲ့ ခွေးလေးပါလား။လူဖြစ်သော်ကား လူချမ်းသာ ဖြစ်ပါစေဗျာ….။အရာအားလုံး လိုအင်ပြည့်ပါစေ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မမြင် ချစ်ခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပင် သနားချည့်ရဲ့ ဟင်
ကျေးဇူးရှင်မှန်းသိတတ်တယ်နော်… ခွေးလေးက တော်တော်လိမ်မာတာပဲနော်….
ဂျပန်နိုင်ငံက ဟာချီ ဆိုတဲ့ခွေးလေးက သူ့သခင်သေသွားတာကိုမသိပဲ သူ့သခင်အလုပ်ကနေပြန်လာနေကျ ဘူတာရုံအပေါက်ကနေ ၉ နှစ်ကျော်ကျော် ညနေ ၅ နာရီထိုးတိုင်း မပျက်မကွက် သူသေတဲ့အချိန်ထိ လာစောင့်ခဲ့ဘူးတယ်။ လူတွေက သူ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သူ့ရဲ့ပုံတူကို ဘူတာရုံမှာ ထုလုပ်ထားကြတယ်လေ။ အဲ့ဒီခွေးလေးဟာ မတ်လ ၈ရက် ၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာသေဆုံးခဲ့တယ်.. Hachi ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရှိတယ် တော်တော်ကောင်းတယ်.. ခွေးချစ်တက်တဲ့သူတွေဆိုရင် မျက်ရည်တောင်ကျတယ်…
တိုကျို- ရှိဘူယ ဆိုတဲ့ဘူတာရုံထွက်ပေါက်မှာ ခွေးလေးရုပ်ထုထုထားတယ်..။ အခုတော့ အဲဒီနေရာက .ချစ်သူတွေဆုံတွေ့တဲ့ ချိန်းတဲ့နေရာဖြစ်နေတာပေါ့..။
မြန်မာပြည်မှာလည်း .. အဲဒါမျိုးဖြစ်အောင် ..ရှင်မွေ့လွန်-မင်းနန္ဒာ -ငမိုးရိပ်အရုပ်ထု..လုပ်စားဖို့ကောင်းတယ်..။
ခွေးတောင် သခင်ကို သိတတ်သေးရင်………… ခွေးမဟုတ်တဲ့ လူတွေ တိရစ္ဆာန်ထက် ပိုသိတတ်ရင် ကောင်းမယ်နော်။
ခင်ဗျားတို့ မသိဘဲ ရမ်းချီးမွှမ်းနေကြတယ်။ သေသူက မကျွတ်ဘဲ အဲဒီနေရာနားမှာ ရှိနေတာကို ခွေးကအဟုတ်မှတ်ပြီး စောင့်နေတာ။
သနားစရာလေး … သူ.ခမျာ … စကားမပြောတတ်လို. … မဟုတ်ရင် … ပြောပြောပီးဘယ်လောက်ငိုနေမလဲမသိဘူး … စကားတပြောပြောနဲ.ငိုလိုက်ရတော့ ရင်ထဲပေါ့သွားရှာမပေါ့ … တတ်နိင်ရင် စကားသွားသင်ပေးအုံးမရ် … ခွေးလေးကိုစကားပြောသင်ရတာ … ကြောင်တွေကိုသင်ရတာလောက် ခက်မရ်မထင်ဘူး။ :D
မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာ ရင်ထဲမှာ အပူမီးတွေ ထကြွလို့ အထိန်းချုပ်နိုင်လွန်းလို့ အရည်အဖြစ် မျက်လုံးအိမ်ထဲက ထွက်ကျ လာသတဲ့။ ငိုရင် ပေါ့မပေါ့တော့ မသိဘူး ငိုပြီးရင် မျက်ချိစပ်တယ်။ မျက်လုံးတွေ ပူထူပြီး မျက်စိမှိတ်ပြီးသာ အိပ်ပလိုက်ချင်တော့တယ်။ ဟီးဟီး။